Meghan Markle WOW mukicheni achigadzirira ndiro dzakachena uye dzakasvibira Archie Harrison - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Meghan Markle WOW mukicheni achigadzirira ndiro "yakachena uye yakachena" kuna Archie Harrison
Vakuru veNew Yorker vakagadzirira Meghan, vakati Duchess yeSussex "anoda kubika" uye anotarisira kudya kwake kwakanaka kuti agadzirire "tsvina uye yakasvibirira" kubata zvishoma. Gayle King, mukuru weC CBS Iyi Mangwanani, akaudza Martin kuti: "Ndine chokwadi kuti mwana acharererwa mune hutano hwakanaka, hwemamiriro ezvinhu. "Anoda kubika, adye zvisikwa pose paanogona. Ndinomuona achigadzirira zvokudya zvake oga. Zvachose! "
Martin, uyo akabatanidza naMeghan, 37, nokuda kwekuchecherera kwake mwana muManhattan munaFebruary, anotarisira duchess kuti aite amai vakanaka.
Akawedzera, "Pachave nekuda kwakanyanya kudai mwana uyu. "
Paivawo nekurumbidzwa kwaHerry Harry, murume waMeghan, waanotarisira kuwona se "baba vakanonoka".
New Royal: Meghan Markle Yakagadzirira Kubika "Yakachena uye Yakachena" Zvokudya zveArae (Mufananidzo: GETTY)
Meghan's stylist akafungidzira mukana wakanaka kubva pamwedzi waMay 2018 wedenga: "Akanaka kwazvo nevana. Kunyange pavakanga vachiita mifananidzo yemhuri mushure momuchato nevanhu vose, akanga ari pasi, achitamba nevana.
"Uye ndipo pandakaziva kuti ndaive saiye baba vakanyanya kupisa munyika. 19659004] Munguva yekuchengetedza mupfungwa, VaMartin vakarara mumisodzi vachidzivirira Meghan "low maintenance".
New Royal: Meghan's Makeup artist Daniel Martin akapa hurukuro kune CBS (Image: CBS)
Iyo yeNew Yorker yakati, "Iwe unonzwa nyaya idzi uye hadzina chokwadi. Ndinomuziva zvakanaka uye ndinoziva kuti haana kukodzera zvose izvi zvisina kunaka. "
Kumirira masikati ano, nhau dzakazoziviswa kuti Meghan akanga aberekerwa muchipatara uye akasiya basa rake rokuberekwa kumba kumba kwaArie. chizvarwa chekuzvarwa chakaitwa pachena.
Yakasimbiswa kuti Archie akaberekerwa paPortland Hospital paGreat Portland Street muLondon.
Tsamba iyi zvakare yakataura naMeghan se "Princess of the United Kingdom". "Nezvemabasa ake.
Meghan akamupa zita rakakwana: "Rachel Meghan, Her Royal Highness Duchess of Sussex".
Mwana weDuke uye Duchess of Sussex akaberekerwa muchikwata chekuberekwa apo dzimwe dzakawanda zviso zvakakurumbira zvakapiwa.
Vamambokadzi Beatrice naEugenie vose vakaberekerwa muPortland, apo Victoria Beckham aiva nevanakomana vake eBrooklyn neRomao ikoko.
Archie, wechinomwe pachigaro cheushe uye wechisere mukuru-mukuru-guru-chizukuru weMambokadzi neDuke weEdinburgh, akasvika pa 6 26 6 May, nokuda kwehuwandu hwa 7 pounds 3 oz.